ईमेल सूची निर्माण गर्ने र अनलाइन मार्केटिंगको साथ सुरू गर्ने सल्लाहहरू
ईमेल सूची भएकोले तपाईंलाई पैसा बनाउन सुरू गर्न मद्दत गर्दछ। सबै यसले लिन्छ एक ईमेल हो तपाईंले केहि नयाँ उत्पादको सिफारिश गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंले बढाढो गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईंसँग ठूलो पैसा तदर्थ्यो, तर मात्र यदि तपाईं एक ठूलो सूची निर्माण गर्न सफल हुनुभयो भने। Semalt डिजिटल सेवा विशेषज्ञ, माइकल ब्राउन कसरी अनलाइन मार्केटिंग को साथ शुरू गर्ने बारे उपयोगी सल्लाह साझा गर्दछ।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले नयाँ उत्पादको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो, जुन तपाईंलाई मूल्यवान र सहयोगी लाग्छ। एक साधारण ईमेल १०% व्यक्तिको सूचीमा पठाइएको%% को कुराकानी दरको परिणाम 500०० बिक्री हुनेछ। मानौं कि तपाइँ प्रति बिक्री $ १० कमाई गर्दै हुनुहुन्छ, जुन धेरै रूढीवादी अनुमान हो, यसले एकै दिनमा तपाइँलाई earn 5,000 कमाउनेछ, एक घण्टा भन्दा कम कामको लागि। अझै ईमेल सूची निर्माण गर्ने बारे निश्चित छैन?
स्वाभाविक रूपमा, १०,००० को ईमेल सूची मध्यम आकारको सूची हो, जसको निर्माण गर्न केहि महिना लाग्नेछ, त्यसैले तपाईंले यसमा काम गर्न सुरु गर्नु पर्छ, भोलि होइन। तपाईको सूची निर्माण गर्न जति चाँडो हुन्छ, चाँडो तपाई पछाडि बस्न सक्नुहुनेछ, नयाँ उत्पादनको बारेमा इमेल पठाउनुहोस्, र त्यस घण्टामा तपाईले एक महिनामा बनाउनुहुने भन्दा बढी कमाउनुहुनेछ।
ईमेल सूचीका फाइदाहरू
प्रत्यक्ष मार्केटिंग गर्न लागत-प्रभावकारिता
क्लिकहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्या .्कहरूको विश्लेषण गर्ने क्षमता जसले तपाईंलाई तपाईंको ईमेल रणनीति ट्वीक गर्न मद्दत गर्दछ
प्राधिकरण निर्माण र विश्वास समय द्वारा मूल्य प्रदान गरेर
तपाईंको ईमेल सूचीको साथ चलिरहेको सञ्चार निर्माणको कारण उच्च रूपान्तरणहरू
ईमेल सूची बनाउने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण अंश मध्ये एक तपाईंको ग्राहकहरू राख्नु हो। सामान्य ज्ञान प्राप्त पाठकहरूको लागि उनीहरूको नि: शुल्क "प्रोत्साहन" को सदस्यता लिनुहोस् र त्यसपछि आफ्नो ईमेल सूचीबाट तिनीहरूलाई हटाउनुहोस्। तपाईंले आफ्नो ईमेल एक्सचेन्ज भर उनीहरूको लागि निरन्तर मान प्रदान गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ, अन्यथा, तपाईंको कडा परिश्रम र भविष्यका मुनाफालाई बिदाइ दिनुहोस्।
प्रभावी ईमेल मार्केटिंग अभियानहरू सबै सही दृष्टिकोणको बारेमा हो। तपाईं दैनिक ईमेलमा प्राप्त गर्नुहुने सबै ईमेलहरूको बारेमा सोच्नुहोस् र किन ती मध्ये केहीले तपाईंको ध्यान खिच्नुभयो र अरूहरू मेटाइए। एक साधारण ईमेलको माध्यमबाट ग्राहकहरुका रुचि र विश्वास प्राप्त गर्न त्यहाँ एक विज्ञान छ। तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको "स्पाम" र यसका बारे थप जान्नको लागि क्लिक गरिएका ईमेलहरूको बीचमा यो भिन्नता हो।
कुञ्जी पोइन्ट्स सम्झनुहोस् जब तपाईको सूची बनाउँदा
तपाईको लक्षित कोठामा विशेषज्ञता र मूल्य प्रदान गरेर विश्वास सिर्जना गर्नुहोस्
पाठकहरूलाई रमाईलो लाग्ने कहानीहरू सिर्जना गरेर उनीहरूको भावनाहरू ट्रिगर गर्नुहोस्
तपाईंको कथा कथनलाई वास्तविक तर्कको साथ ब्याकअप गर्नुहोस् जस्तै प्रशंसापत्रहरू उनीहरूलाई अझै चासो लिनको लागि
यो तपाइँको ग्राहकहरु लाई सीधा कुरा गर्न महत्वपूर्ण छ। तपाईंलाई थाहा छ किन उनीहरूले साइन अप गरे, त्यसोभए उनीहरूसँग ध्यान दिनुहोस् जुन उनीहरूको ध्यान खिच्नेछ। कसैलाई पनि ईमेल मनपर्दैन कि महत्वहीन पोइन्टहरूको बारेमा कुरा गर्दछ, त्यसैले चाँडो र सीधा तपाईंको पोइन्टमा पुग्नुहोस्। त्यसोभए तिनीहरूसँग एउटा कथा दिनुहोस् जुन उनीहरूसँग सम्बन्धित छ। यसले भावनाहरूलाई सतहमा आउँदछ, जुन तपाईको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ।
ईमेल सूची निर्माण गर्ने उत्तम तरिका भनेको सम्मानित अटो रेस्पन्डर प्रयोग गर्नु हो। तपाईं स्वचालित ईमेलहरू सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ जुन भविष्यमा हप्ताहरू फ्यान हुन्छ, र एकचोटि यो गरिसकेपछि, तपाईंले केहि पनि गर्नुपर्दैन। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, तर Aweber सबै भन्दा सम्मानित देखिन्छ। त्यहाँ निःशुल्क वा सस्ता विकल्प खोज्नको लागि प्रोत्साहन छ तर त्यो समस्या तपाईंको ईमेलहरू हप्तामा एकमा सीमित हुन सक्छ, वा ती तपाईंको ग्राहकको स्प्याम बक्समा समाप्त हुन्छन्।
ईमेल विषय लाइनहरु अपूरणीय र सबैको जिज्ञासाको राम्रो हुनु पर्छ। कहानी कथन उनीहरूको दिमागमा कब्जा गर्न र तपाइँको सोचको विषयवस्तुमा आउन आवश्यक छ। कपिराइटिंगको बारेमा अधिक सिकनाले तपाईंलाई बहुमूल्य ईमेलहरू उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाइँको सदस्यताहरू पढ्ने र चाहने बनाउँदछ।
तपाईंले उत्पादनहरू पिचिंग र बिक्री चाहनु अघि तपाईंको ईमेल सूचीको साथ विश्वास निर्माण गर्न सम्झनुहोस्। प्राधिकरण विश्वासबाट आउँदछ, र यो यही हो जसले तपाईंलाई भविष्यमा बिक्री गर्न अनुमति दिन्छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ पाठकलाई के गर्ने बताउनुहुन्छ। यो विरोधाभासी लाग्न सक्छ, तर अध्ययनले प्रमाणित गर्‍यो कि एक व्यक्तिलाई केहि गर्न भन्नु भन्दा केहि राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। "अब १-मा -१ कोचिंगको लागि साइन अप गर्नुहोस्" "के तपाईं १-on-१ कोचिंगको लागि साइन अप गर्न चाहानुहुन्छ?" भन्दा बढी सक्षम हुनेछ।
आशा छ, यो लेखले तपाईंलाई ईमेल सूची बनाउने बारेमा एक वा दुई चीज जान्न मद्दत गर्दछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नको लागि यो हो कि तपाईं सुरू गर्न कुर्नुहुन्न। यो अत्यावश्यक महत्त्वको छ कि तपाइँ यस कार्यको लगत्तै सुरू गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग कुनै हिचकिचाहट छ भने, Semalt डिजिटल सेवाहरू सन्दर्भ गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईंको लागि चीजहरू स्पष्ट पार्नेछौं ।